Paris Saint-Germain oo si joogta ah ula xiriirta wakiilada Ousmane Dembele | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Paris Saint-Germain oo si joogta ah ula xiriirta wakiilada Ousmane Dembele
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo saxiixa garabka Barcelona Ousmane Dembele .
24-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xagaaga, waxaana si aad ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo Camp Nou, iyadoo wadahadalo heshiis kordhin ah uu ku guuldareystay.
Sida laga soo xigtay Mundo Deportivo , iyada oo loo marayo Daily Mail , PSG ayaa kor u qaadi doonta xiisaha ay u qabto saxiixa Dembele haddii ay ogaadaan in xiddiga garabka ka ciyaara uu iska diidayo qandaraas cusub oo uu ku sii joogayo Barcelona.
Dembele, oo sidoo kale lala xiriirinayo Manchester United , Liverpool iyo Newcastle United , ayay u badan tahay inuu kordhiyo sii joogida kooxda reer Catalonia, iyadoo la rumeysan yahay in ninka reer France uu dalbanayo € 80m (£ 67m) oo xirmo ah si uu u sii joogo kooxda. Barca ma awoodo inay bixiso.
PSG, waxay haysataa dhaqaale ay ku buuxiso dalabaadka Dembele, sidaas darteed waxay ka fiirsanayaan inay wadahadal rasmi ah ka galaan heshiis horudhac ah oo loogu talagalay xiddiga garabka ka ciyaara, ka hor inta aan si xor ah loogu wareegin Parc des Princes.
Xasan Sheekh iyo Qoor Qoor oo ka hadlay heshiiskii galabta laga...
CABDI NAGEEYR & OO SHALAY WACDARO KA DHIGAY NEWYORK, WARAYSI
Heung-min Son oo Qarka u saaran inuu soo qabto Mohamed...
Muxuu taliyaha ciidamada Asluubta ka yiri amniga dalka?
Liverpool ayaa u aragta Robert Lewandowski inuu yahay bartilmaameedka mudnaanta leh...
Juventus oo kula xifaaltameysa Chelsea iyo Manchester United saxiixa Aurelien Tchouameni